Thursday, 10 Jan, 2019 11:51 AM
करिब ९ वर्षअघि नेपालमा डाइरेक्ट टु होम ‘डिटिएच’ प्रविधिमा आधारित डिशहोम कम्पनी स्थापना भयो । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण ग्रामीण भेगमा केबल टेलिभिजन पुग्न नसकिरहेको र शहरमा पनि गुणस्तरीय च्यानल हेर्न नपाइरहेको अवस्थामा डिशहोम आएपछि टेलिभिजनको क्षेत्रमा एक किसिमको क्रान्ति नै आयो । तारको आवश्यकता नपर्ने हुँदा अहिले नेपालको सबैभन्दा होंचो केचनादेखि सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म मज्जाले टेलिभिजन हेर्न सकिने आवस्था आएको छ । शहरबजारमा पनि गुणस्तरीय एचडी च्यानल हेर्न सकिने अवस्था आएको छ । यहीबीचमा सरकारले नेपालमा डिजिटलाइजेशन पनि लागु गरिरहेको छ । डिजिटलाइजेशनलाई लागु गर्न पनि सरकारलाई डिशहोमको सेवाबाट धेरै सजिलो भयो । कारण, डिशहोमको प्रविधि र यसको ठुलो बजार हिस्सा । तर, डिजिटिलाइजेशन भनेर सेटअप बक्स वितरण गरिएपनि कतिपय कम्पनीहरूले त्यसका मापदण्ड पुरा नगरेका समाचारहरु बाहिरिरहेका छन् । हामीले नेपालमा डिजिटलाइजेशनको अवस्था, डिजिटलाइजेशनमा गएपनि पु्रा नभएका मापदण्डलगायत डिशहोमका पछिल्ला गतिविधिबारे डिश मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदिप आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ :
उपत्यकामा डिजिटलाइजेशन लागु भएपनि उपत्यकाबाहिर अहिले त्यति चर्चा सुनिँदैन, अहिले डिजिटलाइजेशनको अवस्था के छ ?
चरणबद्ध रूपमा गर्ने भन्दै ०७३ बैखाखदेखि डिजिटलाइजेशनमा जाने भनेर सरकारले मिति तय गर्यो । पछि भूकम्पका कारण एक वर्ष मिति सारियो । त्यसपछि पनि विभिन्न मिति सार्दै आइरहेको अवस्था हो । ०७५ असारमा मुलुकभर नै डिजिटलाइजेशन लागु गर्ने भनेर सार्वजनिक गरियो । सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने त डिजिटलाइजेशन भइसक्यो । रोयल्टी, लाइसेन्सीङको कुरामा डिजिटल हुनुपर्छ भन्ने छ । अब अहिले डिजिटल लाइसेन्स बिना कोही पनि चल्न पाउँदैनन् । तर, अवस्था कस्तो छ भने डिजिटलाइजेशनको मूख्य उदेश्य के हो भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु ।
सरकारको तर्फबाट हेर्दा ट्याक्स कलेक्सन, रोयल्टी, सबै पारदर्शी हुन्छ । डाटा बेशमा बस्ने हुनाले राजश्व बढ्ने र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कुरा हो । हामीले यो नौ वर्षमा ४ सय १० करोड विभिन्न किसिमका कर तिरेका छौँ । यो हिसाब हेर्ने हो भने सरकारले यसबाट अर्को तीन, चार गुणा राजस्व बढी लिन सक्छ । अर्को, डिजिटलाइजेशनको मूख्य एजेण्डा भनेको डिजिटलाइजेशन भइसकेपछि सरकारको निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ । योभन्दा अगाडी एनलगमा सात सय केवल प्रदायकहरु थिए । जसले गर्दा सरकारले निगरानी गर्न सम्भव थिएन, तर डिजिटलाईजेशनमा एमएसओ ७-८ वटा मात्र छ, अब बढि भए १०-१२ वटा होला । जसलार्ई निगरानी गर्न सजिलो हुन्छ ।
सरकारको निगरानी किन जरुरी छ भने नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो । कतिपय संवेदनशिल कुराहरु छन् । केही वर्षअघि ऋतिक रोशनले के ने भनेर नेपालमा हिंसा भड्कियो । कतिको त मृत्यु पनि भयो । पछि इराकमा घटना भयो । मासमा नकरात्मक कुरा, राष्ट्रियताका कुरामा नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । कुनै विदेशी च्यानलले नेपालका विषयमा जथाभावी नकरात्मक कुरा लाद्न थाल्योे भने त्यसलाई रोक्न पनि डिजिटलाइजेशन आवश्यक छ । अहिले तराइ भेगमा विदेशी डिटिएचमा टिभी हेरिरहेका छन् । विदेशी डिटिएच हेर्ने नेपालीले सधै भारतका समाचार, भारतका जानकारी मात्र पाइरहेका छन् । त्यहाँका सानो बच्चालाई सोध्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको नाम नरेन्द्र मोदी भनिदिन्छ । अर्को कुरा डिजिटल राइट्स रोक्न पनि डिजिटलमै गइसकेपछि सकिन्छ । तर, यसका कतिपय मापदण्ड पुरा भएका छैनन् र उपत्यकाबाहिर प्रभावकारी ढंगले काम हुन सकेको छैन ।
अहिले राजधानीलगायत प्रमुख शहरमा डिजिटल सेवा नै छ, सबै कम्पनीले सेटअप बक्स पनि लगाएका छन्, यसले डिजिटलाइजेशनको जुन मर्म थियो, जुन उदेश्य थियो, त्यसलाई पुरा गरिसकेको अवस्था हो ?
त्यो चाहिँ भएको छैन, मेरो मुख्य भनाई नै यही हो । यहाँ अलिकति कन्फ्युजन छ । यहाँ सेटअपबक्स लाग्दा वित्तिकै डिजिटल भयो भन्ने भ्रम छ । यो कुरा आधा सत्य हो । डिजिटल हुनलाई कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम (क्यास) र बिलिङ सिस्टम अनिवार्य हुनुपर्छ । सरकारले कन्ट्रोल गर्न, कसले कति हेरेको छ, कसले कति पैसा तिर्यो भन्ने हेर्नलाई यी कुरा अनिबार्य छ ।
त्यसो भए अहिले क्यास सिष्टम बिना सेवा दिएका कम्पनीहरूको सबै डाटा सरकारसँग छैन ?
छैन । सरकारसँग त्यो डाटा छैन । डिशहोममा क्यास सिष्टम छ । हाम्रोमा सरकारबाट आएर निगरानी, निरीक्षण, अनुगमन गर्नु पर्यो भने एक क्लिकमै सबै पत्ता लाग्न सक्छ । तर, यस्तो सबै कम्पनीमा छैन । कतिले गर्नु भएको छ÷छैन एकीन तथ्यांक पनि छैन । काठमाडौंमा मात्र बजार हैन । काठमाडौंको पनि रिंगरोडभित्र भएर बाहिर नहुन सक्छ । काठमाडौंबाहिर सेट अप बक्स बाड्ने काम भएको छ, तर कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम राख्ने काम भएको छैन ।
तपाईंहरूले आफुहरूको बजार २५ प्रतिशत भएको बताउँदै आउनुभएको छ, कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हुने हो भने चार गुणासम्म राजश्व उठ्छ पनि भन्नुभएको छ । सबैले क्यास आइडी पनि लगाएका छैनन्, त्यसो भए डिजिटलमा गएर पनि सरकारले राजस्व गुमाइरहेको अवस्था हो ?
मेरो मूल सार नै यही हो । हामी २५ प्रतिशत मार्केट हिस्सा हुने कम्पनीले यतिका धेरै राजस्व बुझाएका छौँ । बाँकी ७५ प्रतिशत हिस्साले पनि सही ढंगले लागु गर्न सक्ने हो भने त चार गुणा बढी राजस्व उठ्छ नि । बाँकी ७५ प्रतिशतले नै राजस्व तिरेनन् भन्ने कुरा मैले गरेको होइन केही न केही त बुझाएको नै होला । तर, ६० देखि ६५ प्रतिशतले त पक्कै पनि बुझाएका छैनन् भन्ने मैले अनुमान गरेको छु ।
तपाईंले क्यास सिष्टम भएकाले डिसहोम पारदर्शी छ भन्नु भयो । बाँकी बजार हिस्साबाट राजस्व गुमिरहेको छ, क्यास आइडी लगाएका छैनन् पनि भन्नु भयो । तर, पछिल्लो समयमा तपाईहरूलाई पनि ग्राहकको संख्या लुकाएको, कर छलेको छ भन्ने आरोप लागेका समाचार सुनिएका छन्, खास कुरा के हो ?
यो मनगणन्ते आरोप हो । यहाँ विभिन्न किसिमका प्लेयरहरु छन् । थाहा छैन, यो चाहिँ कसको उक्साहटमा यस्तो आरोप लगाउनुभयो ? यस विषयमा मसँग पनि कुरा भएको थियो । मैले हाम्रोमा लुकाउनु पर्ने केही नभएको बताएको थिएँ । हामीले सम्बन्धित निकायलाई सम्पूर्ण जानकारी दिएका नै छौँ । हामीले बैंकलाई देखाउनुपर्ने बैंकलाई देखाएका छौँ । ट्याक्स अफिसलाई दिनुपर्ने, ट्याक्स् अफिसलाई दिएका छौँ । हामीले लुकाउनुपर्ने कुरा केही छैन । जुन निकायलाई दिनुपर्ने हो दिन्छौँ, तर कपोकल्पित इन्फरमेशन बनाएर अरूलाई दोष लगाउनेलाई के भन्न सक्छौँ र ?
डिजिटलाईजेसनमा लगभग गईसकेको अवस्था छ । डिजिटलाईजेसनमा गएपछि क्यास हुनु र क्यास नहुनुमा झन् बढी चुनौति देखिएको हो ? क्यास हुने र नहुने बिचमा त झनै समस्या आउला ? यस विषयमा तपाईंहरूले सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहनुभएको छ ?
हामीले त शुरुका दिनदेखि नै भनेका हौँ, क्यास बिनाको सेवा दिइएको छ भने यो त एनलग बराबर नै छ । मैले भनेकोजस्तै सरकारप्रतिको दायित्व, सरकारलाई हुने फाईदा हेरेर कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम लगाउनु नै पर्छ । सरकार पनि कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम लगाउनमा सकारात्मक नै देखिन्छ । तर, सरकारसँग पर्याप्त स्रोत साधन नभएकाले हुन सक्छ, यो अहिले पूर्ण रुपमा लागु नभईसकेको अवस्था छ । यो कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम पूर्णरुपमा लागु गराउन यसको दायरा बढाउन आवश्यक छ । डिजिटलाईजेसनको कोर पार्ट भनेको नै कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हो । अब यसलाई नै लागु गरिएन भने त डिजिटलाईजेसनको केही अर्थ नै भएन नि । अनुगमन पनि अलि प्रभावकारी गर्नुपर्यो । एकदिन अनुगमन गर्ने, तर अनुगमन गरेर फर्केपछि फेरि त्यहि सेवा दिने अवस्था छ । यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने हो ।
अहिले धेरै चिजमा ग्रिन मार्केट र ग्रे मार्केट भन्ने छ । ग्रिन मार्केटमा हेर्ने हो भने ग्रे मार्केटले यसमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यहाँ क्यास आईडी भएका कम्पनी र नभएका कम्पनीले गर्दा डिसहोमको बजारमा पनि प्रभाव पर्छ होला । यसले सरकारलाई पनि प्रभाव पर्छ । कि तपाईहरुको पनि सबैलाई क्यास आइडी हटाऔं भन्ने माग हो ?
सरकारलाई क्यास आईडी हटाउ भन्ने त कुरा नै आउदैन । किनभने क्यास आइडी लागु गर्नु नेपाल सरकारले मात्र नभई आईटियूले नै दवाव दिएको छ । क्यास आईडी हटायो भने भविष्यमा आईटियूले स्याटेलाइट स्पेस दिन्न भन्न पनि सक्छ । तर, सरकार आफैलाई फाईदा हुने कुरा किन नगर्ने ? एकपटक यसलाई सेट अप गर्दा अर्बौँ राजश्व आउँछ भने सरकारले किन सेट नगराउने ? डिजिटलाईजेसनको कोर पार्ट भनेको नै कन्ट्रोल एक्सेस सिस्टम हो । अब यसलाई नै लागु गरिएन भने त डिजिटलाईजेसनको केही अर्थ नै भएन नि ।
तपाईको बिचारमा सरकारले यसलाई पूर्ण लागु गराउन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला ?
मेरो बिचारमा यो टेलिभिजन प्ल्याटफर्म ईन्डस्ट्रीजलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो कि भन्ने लाग्छ । वास्तवमा भन्नु पर्दा यो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने कुरा हो । आजको दिनमा टेलिकम, ईन्टरनेट अलि बढि प्राथमिकतामा परेकोजस्तो देखिन्छ । तर, नागरिकको जुन सूचनाको हक छ, त्यो सूचनालाई पुर्याउने त टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले नै हो । आज सरकारले आफ्ना केही सूचना पुर्याउनुपर्यो भने त माध्यम टेलिभिजन नै हो । यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने हो । तर, यो नपरेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागि रहेको छ । हामीले सरकारका मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीसँग कुरा गर्दा हुन्छ, यो गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ । त्यो हिसाबले म सकरात्मक छु । सायद उहाँहरूका कतिपय बाध्यता पनि होलान् । तर कहिलेकाहीँ फेरी यति ठुलो संभावना रहेको क्षेत्रमा पनि अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा अन्डरभ्यालु भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ ।
डिसहोम बजारमा आएको एक दशक भयो । डिसहोम ग्रामिण भेगमा त एकमात्र विकल्प बनेको छ । अहिले शहरमा पनि डिशहोम हेर्नेको संख्या बढ्दो छ । शहरमा अन्य कम्पनी पनि आक्रामक रूपमा आइरहेका छन् । शहरमा अहिले डिशहोमको प्रतिश्पर्धा अलि बढेको हो ?
कुनैपनि व्यवसाय सुरु गर्दा जहाँ अरू प्रतिस्पर्धी कम हुन्छन् त्यस्तो बजार रोजिन्छ । हामीले पनि त्यस्तै बजार रोजेका थियौं । त्यसपछि आफ्नो गुणस्तरमा सुधार गर्दै क्रमशः बजार विस्तार गर्दै लगेका हौँ । प्रतिस्पर्धा नभएको एकदमै ग्रामिण भेगमा मात्र हो । नत्र त अरु ठाउँमा त प्रतिस्पर्धा छ । तर, सेवा र गुणस्तरको हिसाबले हामी दाबी गर्न सक्छौं, हामी नम्बर वान छौँ । हाम्रो साबिकको सबै अञ्चलमा सर्भिस सेन्टरहरु छन् । आठ सयभन्दा बढी सर्भिस फ्रेन्चाइजहरु छन् । २० हजारभन्दा बढी रिर्चाज आउटलेटहरु छन् । ९० हाराहारीका डिस्ट्रिब्यूटरहरु छन् । २५ सय हाराहारिमा सब डिलरको सञ्जाल छ ।
तपाईरू ग्रामिण भेगमा एकमात्र विकल्प बन्नुभएको छ । शहरी क्षेत्रमा पनि क्वालिटी सर्भिस लगायतले नम्बर वान नै भन्नुभएको छ, तर पछिल्लो समय तपाईहरुले सिमटिभी पनि लिनु भयो । खासमा सिमटिभी लिनुको मूख्य कारण के हो ?
मार्केटमा सबैजना एउटैमा आउँछन् भन्ने हुँदैन । ग्राहकको पनि आ–आफ्नै डिमाण्ड हुन्छ । कसैले सानो आकारका टेलिभिजन सेटमा हेरेका होलान्, उनीहरूलाई सिमटिभी हेरेपनि पुग्ला । अथवा पहिले नै केबल जोडेको ठाउँमा यसलाई रोज्लान् । राम्रै क्वालिटी हेर्छु, पैसा पनि तिर्छु भन्नेले डिशहोम हेर्छन् । यो भनेको सिमटिभिको क्वालिटी नराम्रो छ भन्ने होइन । सिमटिभिको क्वालिटी पनि राम्रो छ । तर, तुलना गर्दा अलिकति फरक चाहीँ हुन्छ । शहरमा बस्ने, एउटै घरमा धेरै जना बस्नुभएको छ भने त्यसमा सिमटिभी रूचाउन सक्नुहुन्छ । हामीले सिमटिभी लिनुको अर्को कारण छ– भोलि हामी ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटसहित सेवा दिने योजनामा छौँ । त्यतिखेर तार जोड्ने अवस्था आयो भने सिमटिभी राम्रै हुन्छ । हुन त हामीले भोलीका दिनमा डिशहोमका ग्राहकलाई पनि इन्टरनेट दिन्छौँ । जे होस् ग्राहकलाई अप्सन त भयो नि । कतिपय विदेशी च्यानलले डिटिएचलाई मात्रै च्यानल दिन्छौँ भन्ने पनि हुन्छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । सिमटिभीमा हामीले लोकल च्यानल पनि दिइरहेका छौँ । यी दुईमा भेरियसन छ ।
तपाईहरूले इन्टरनेट सेवा दिने भनिरहनुभएको छ । डिसहोमका ग्राहक र सिमटिभीका ग्राहक छुट्टै छन्, कसरी दिनुहुन्छ सेवा ?
डिशहोमबाट पनि इन्टरनेट दिन सकिन्छ, यो प्राविधिक रूपमा सम्भव छ । यसमा कुरा आयो फाइनान्सियल । यसमा हामीले वर्कआउट गरिरहेका छौँ, कसरी सर्वसुलव बनाउन सकिन्छ भनेर । डिशहोमबाट जहाँ केबल पुग्न सक्दैन, त्यस्तो रिमोट एरियामा इन्टरनेट सर्भिस पुर्याउँछौ । जहाँ सिमटिभी छ, त्यस ठाउँमा ब्रोडब्याण्डमार्फत दिन्छौँ । कतिपय अवस्थामा डिसहोमको ग्राहक र सिमटिभीको इन्टरनेट पनि हुनसक्छ । हामी विभिन्न ढंगले सेवा दिन्छौँ ।
तपाईँहरूले आफै टेलिभिजन सिंग्नल घरघरमा पुर्याइरहनुभएको छ भने अर्कातिर आफ्नै च्यानलहरू प्रसारण गरिरहनुभएको छ, अब आफ्नै च्यानलहरू स्थापित गर्न खोज्नु भएको हो ?
रमाइलो टिभी डिशहोममा मात्र आइरहेको छ । यो हाम्रो मल्टिपल च्यानल प्रालि र डशहोमको एउटा सम्झौता हो । यो च्यानल डिशहोमले नभएर मल्टिपल च्यानलले सञ्चालन गर्ने च्यानल हो । अरू च्यानल पनि तिनै हुन् । यी च्यानल राम्रो हुँदै गए भोली हामी स्याटेलाइटमा गएर अन्य केबलमा पनि आउन सक्छौँ, सबै कुरा मिल्दै गए । मल्टिपल च्यानल प्रालि फेरि छुट्टटै हो । यसमा डिशहोमकै कतिपय लगानीकर्ताहरू पनि हुनुहुन्छ । यी छुट्टै कम्पनीबाट आइरहेका छन् । यी च्यानलहरू डिसहोममा आउने च्यानल हुन्, आफ्नै च्यानल चाहिँ होइनन् । एउटा शो केशमा हामीले डिशहोमका कुरा मात्र प्रसारण गर्छौँ ।
डिशहोम आएको यो ८-९ वर्षमा टेलिभिजन क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै आयो, हरेक कुनाकाप्चामा टेलिभिजन हेर्न सम्भव भयो, अबको डिशहोमको यात्रा कस्तो हुन्छ ?
एउटा– हामी ओटीटी प्ल्याटफर्ममा जाँदै छौँ । अर्को– हामीले फिल्मका कन्टेन्टहरू लिइरहेका छौँ । अर्को– हामीले डिशहोमबाट नभए पनि यहि भित्रकै टिमबाट सेटअप बक्सहरू नेपालमै उत्पादन गर्ने तयारी छ । अन्य कुरा समय सापेक्ष र बजारको आवश्यकताअनुसार लिएर आउँछौँ ।